လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကုထုံးဆရာကိုမေးပါ - ညစ်ညမ်းမှုကမင်းအတွက်မကောင်းဘူးလား။ လိင်ကုထုံးလော်ရာ Miano - သင့် ဦး နှောက်မှ Porn တွင်
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကုထုံးဆရာကိုမေးပါ - ညစ်ညမ်းမှုကမင်းအတွက်မကောင်းဘူးလား။ လိင်ကုထုံး Laura Miano
Laura Miano သည်လိင်နှင့်ဆက်ဆံရေးစာရေးဆရာနှင့်မဲလ်ဘုန်းမြို့အခြေစိုက်လိင်ကုထုံးပညာရှင်ဖြစ်သည်။ သူမ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိုးရိမ်မှုများရှိသူများကိုကူညီရန်နှင့်ယဉ်ကျေးမှုစံနှုန်းများထက် ကျော်လွန်၍ သူတို့၏လိင်ဘဝကိုမြှင့်တင်လိုသူများကိုကူညီရန်ဖြစ်သည်။ သူမအကြောင်းပိုမိုလေ့လာရန်၊ လိုက်နာပါ @lauramianosexology သို့မဟုတ်သူမနှင့်ဆက်သွယ်ပါ ဒီမှာ.
"ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကမင်းအတွက်မကောင်းဘူးလား" - Pondering Porn
သင့်မေးခွန်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် porn တစ်ခုစိတ်ဝင်စားဖို့တစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်အရာရာမ ၀ င်မီ၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံသည်ကြီးမားသောထီးနန်းဖော်ပြချက်ဖြစ်ကြောင်းမီးမောင်းထိုးပြရန်အရေးကြီးသည်။ ဒါဟာကွဲပြားခြားနားသောအရာများစွာကိုရည်ညွှန်းသည်။
စာအုပ်များ၊ ဓာတ်ပုံများ၊ ဗီဒီယိုများ၊ တိုက်ရိုက်စကားပြောခြင်းများနှင့်အခြားအရာများပါဝင်သည်။ ဤအရာများ၏ပါ ၀ င်မှုသည်ချစ်သူနှစ် ဦး အကြားအာရုံခံစားမှုကင်းမဲ့စွာကြည့်ရှုခြင်းမှအစလိင်စော်ကားမှု၊ မတိကျသောကျား၊
သင်ထင်ကောင်းထင်လိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်းသရုပ်ဆောင်များကသဘောတူပါကဤထီးအောက်တွင်ထိုင်သည့်အရာအားလုံးသည်လုံးဝကောင်းပေသည်။ တခုတခုအပေါ်မှာအခြေခံပြီးလုံးဝကောင်းတယ်၊ အဲဒါကိုသင်ဘယ်လိုခံစားရလဲ။ အချို့သူများအတွက် ပို၍ အစွန်းရောက်သောအရာများသည်အလွန်များပြားလာပြီး၎င်းသည်သူတို့၏ကိုယ်ကျင့်တရားနယ်နိမိတ်ကိုဖြတ်ကျော်သွားသည်။ အခြားသူများအတွက်မူပိုမိုနူးညံ့သောပစ္စည်းသည်မလောက်င၊
ပထမ ဦး စွာ porn သည်သင့်အတွက်ဆိုးသည်ဖြစ်စေဆိုးသည်ဖြစ်စေသင်စတင်လိုသောအမျိုးအစားသည်ပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ထိုအခါစဉ်းစားရန်အခြားရှုထောင့်ရှိပါတယ် - ဘယ်လောက် porn မင်းဘဝကိုနှောင့်ယှက် ပြီးတော့သင့်ရဲ့အစစ်အမှန်ကမ္ဘာကလိင်ကိစ္စကိုမျှော်လင့်ပါတယ် ဤသည်မှာသင်အနည်းငယ်ရင်းနှီးကျွမ်း ၀ င်နိုင်ဖွယ်ရှိသော porn ၏ဘေးထွက်ဖြစ်သည်။ ဆိုးသောအရာ။ ညစ်ညမ်းသောအကောင်းဘက်၌လည်းကောင်း (ဤနောက်တွင် ထပ်မံ၍)၊ မကောင်းတဲ့အခြမ်းအတော်လေးပြproblemနာရှိနိုင်ပါသည်.
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ porn ဟာအရမ်းကိုလှုံ့ဆော်ပေးလို့ပါ။ ၎င်းသည်သင်၏ ဦး နှောက်၏ဆုလာဘ်လမ်းကြောင်းများကိုသဘာဝလောကတွင်မရနိုင်သည့်အတိုင်းအတာအထိလွှမ်းမိုးစေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး နှောက်သည်အကျိုးကျေးဇူးများဖြစ်သောအစားအစာ၊ လိင်၊ လူမှုရေးအပြန်အလှန်အကျိုးပြုမှုများကိုရှာဖွေရန်ကြိုးတပ်သောကြောင့်ညစ်ညမ်းသည်သင်အဓိက ၀ ယ်ရန်သာတတ်နိုင်သည့်အချိန်ငါးစာစားသောအစားအစာနှင့်တူသည်။ ၎င်းသည်gaရာမကျေနပ်ဖွယ်ရာဖြစ်ပြီးကြည့်လိုက်လျှင် dopamine ပုံတစ်ပုံကိုထုတ်လွှတ်သည်။
တစ်စုံတစ် ဦး သည်လိင်မှုဆိုင်ရာမတူညီသောလိင်အကျင့်များပါ ၀ င်သောဗီဒီယိုအသစ်တစ်ခုကိုမြင်သောအခါ dopamine ထပ်မံထုတ်လွှတ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆုလာဘ်လမ်းကြောင်းများသည်ချစ်သူနှင့်ပျားရည်ဆမ်းခရီးကိုကြုံရသကဲ့သို့အသစ်နှင့်အသစ်သောအကြောင်းအရာများကိုနှစ်သက်သည်။ အစမှာစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းပေမယ့်အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှစိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေလည်းလျော့နည်းသွားပါတယ်။ အလားတူဖြစ်စဉ်ကိုသို့သော် porn နှင့်အတူဤဖြစ်စဉ်ကိုလျင်မြန်စွာဖြစ်ပျက်။ ညစ်ညမ်းတဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုသင်လှိမ့်ကြည့်တဲ့အခါမိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲရာနဲ့ချီတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်။ မင်းဘယ်လိုကြည့်ရှုနိုင်တယ်ဆိုတာကြည့်နိုင်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား?
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုကိုထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းမရှိသောသူများအတွက်၎င်းတို့သည်စိတ်သောကရောက်စေပြီး၎င်းတို့၏ကျယ်ပြန့်သောအသက်တာကိုဆိုးကျိုးသက်ရောက်စေလျှင်၎င်းသည်မကောင်းသောအရာသာဖြစ်သည်။ ဤနောက်ဆုံးအချက်နှစ်ချက်သည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ အချို့လူများကမူညစ်ညမ်းမှုကိုမကောင်းဆိုးဝါးဟုရှုမြင်ကြပြီး၎င်းကိုအသုံးပြုခြင်းသို့မဟုတ်အားကိုးခြင်းဖြင့်ပြpartnerနာရှိတတ်သည်ဟုထင်ကြလိမ့်မည်။ ဒါဟာအားကိုးဖို့အဆင်ပြေပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်အခြားပြproblemsနာတွေဖြစ်စေတဲ့အခါမှာ၊ ဒီပြproblemsနာတွေကိုသင်မကြိုက်တဲ့အခါကိစ္စတွေကပိုပြီးပြaticနာဖြစ်လာတယ်။
ဒီတော့ဒီကျယ်ပြန့်တဲ့ပြproblemsနာတွေကဘာဖြစ်မလဲ။ Porn သည်လိင်မှုဆိုင်ရာပြaနာများ၊ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၊ orgasm / သုက်နိုင်ခြင်းနှင့်လိင်အလိုဆန္ဒနိမ့်ခြင်းစသည်တို့နှင့်ဆက်နွှယ်သည်။ ဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာကလိင်မှုဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှု (arousal) နှင့်အော်ဂဇင်စသည့်တုန့်ပြန်မှုများသည် porn နှင့်သင်၏အတွေ့အကြုံအပေါ်တွင်မူတည်သည်။
ဆိုလိုတာကသင့်ရဲ့ဝမ်းဗိုက်ပေါ်ရှိလက်တော့ပ်၊ သင်၏လိင်အင်္ဂါများပေါ်၌လက်တွေသို့မဟုတ်လက်ချောင်းများလှုပ်ရှားခြင်း၊ သင်၏မျက်နှာပေါ်ရှိမျက်နှာပြင်နှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအားလုံးသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွမှုနှင့်အော်ဂဇင်ကိုရရှိရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအစိတ်အပိုင်းများဖြစ်လာသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး နှောက်သည်ဆုလာဘ်များကိုချစ်မြတ်နိုးသည်နှင့်အမျှ၎င်းအရာအားလုံးကို porn မှရရှိသောကြီးမားသောဆုလာဘ်နှင့်ဆက်စပ်ထားသည်။
လူအများစုအတွက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကို ၄ င်းတို့၏ချိုသောအော်ဂဇင်ကိုခံနိုင်စွမ်းနှင့်ချိတ်ဆက်ထားခြင်းဖြင့်လိင်ဆက်ဆံမှုပြုသည့်အခါလိင်မှုကိစ္စအလှည့်အပြောင်းတွင်ဆန္ဒရှိရန်၊ နှိုးဆွရန်သို့မဟုတ်အော်ဂဇင်တစ်ခုရရှိရန်ခက်ခဲသည်။ ငါပြောခဲ့သလိုပဲသဘာဝလောကဟာညစ်ညမ်းမှုလိုမင်းရဲ့ဆုလာဘ်လမ်းကြောင်းကိုလှုံ့ဆော်မပေးဘူး။
ဒါ့အပြင်အပျော်အပါးနဲ့လိင်ကိစ္စအတွက်ခိုင်မာသောလိင်ပညာရေးကိုကျွန်ုပ်တို့အလေးအနက်ထားခြင်းမရှိကြတဲ့အတွက်လူအများစုကလိင်ကိစ္စအကြောင်းကိုလေ့လာခြင်းအားဖြင့်၊ လိင်ကိစ္စဟာလိင်ဖျော်ဖြေမှုမဟုတ်ဘဲဖျော်ဖြေရေးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမေ့သွားကြတယ်။ ခန္တာကိုယ်၌မတူကွဲပြားမှု၊ အထီးကျန်မှုပျော်ရွှင်မှု၊ ကျား၊ မရေးရာပုံစံများနှင့်လုံခြုံစိတ်ချရသောလိင်ကိစ္စကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းစသည်တို့မရှိပေ။
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုအသုံးပြုသောသူတို့သည်မည်သည့်လိင်ပုံစံမျိုးနှင့်ဖြစ်သင့်သည်ကိုသူတို့၏ပုံသဏ္shapeာန်ကိုပုံသွင်းရန်ကြိုးစားသူများသည်သူတို့ကိုယ်တိုင်နှင့် ၄ င်းတို့၏လိင်ကြင်ဖော်ဘက်များအပေါ်မယုံနိုင်လောက်အောင်လက်တွေ့မကျသောမျှော်လင့်ချက်များထားရှိရန်အန္တရာယ်ရှိသည် ထို့ကြောင့်လိင်နှင့်ဖျော်ဖြေမှုဆိုင်ရာလိင်ကိုခွဲခြားရန်အရေးကြီးသည်။
ဒါကမှောင်မိုက်တဲ့အရာဖြစ်တယ်။ ၎င်းသည်လူတစ် ဦး ၏မျှော်လင့်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်ပျက်ကွက်ခြင်း၊ လက်တွဲဖော်လိင်မှစိတ်ကျေနပ်မှုလျော့နည်းခြင်း၊ ဆက်ဆံရေးအတွင်းပconflictိပက္ခများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုများစွာကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ပျံ့နှံ့မှုသည်အင်တာနက်ပျံ့နှံ့မှုနှင့်အတူသိသိသာသာတိုးပွားလာသည်မှာတိုက်ဆိုင်မှုမရှိပါ။
ဒါကြောင့်သင်ဤအချက်မှာလုံးဝမထင်မှတ်ခံရပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျသော်လည်းစဉ်းစားစေခြင်းငှါအဘယျသို့ပေမယ့်, porn ၏ကောင်းတစ် ဦး အခြမ်းလည်းရှိပါသည်။ သင်၏ဘဝပုံစံနှင့်လိင်ဆိုင်ရာမျှော်လင့်ချက်များအပေါ်မည်သို့သက်ရောက်စေကြောင်းသင်ဂရုပြုပြီးဗဟုသုတရှိပါက၎င်းမှသင်အမှန်တကယ်ရရှိနိုင်သည်။
သင်သည်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နှင့်ညစ်ညမ်းမှုကို သုံး၍ သင်နှစ် ဦး စလုံးကိုစိတ်ခံစားမှုရှိစေရန်၊ အနည်းငယ်ကွဲပြားသောအရာတစ်ခုခုကိုကြိုးစားရန်သို့မဟုတ်လိင်ဆန္ဒများနှင့် ပတ်သတ်၍ ဆက်သွယ်မှုကိုချက်ချင်းပြုလုပ်ရန်အသုံးပြုနိုင်သည်။ သင်ကိုယ်တိုင်လည်း၎င်းကိုကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းတစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပြီးလိင်ဆန္ဒများကိုပုံမှန်ဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အခြားသူများသည်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်မိမိသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်ခြင်းကြောင့်အရှက်ကွဲခြင်းကိုဖယ်ရှားနိုင်သည်။
လူများသည်ကိန်းများနှင့် fetishes များ၊ ရာထူးအသစ်များနှင့်အခြားလိင်ဆိုင်ရာစွမ်းရည်များအကြောင်းကိုသင်ယူနိုင်သောကြောင့်၎င်းသည်ပညာရေးဆိုင်ရာအရင်းအမြစ်တစ်ခုလည်းဖြစ်နိုင်သည်။ ခေတ်သစ်ခေတ်နောက်ကျနေပြီဖြစ်သောညစ်ညမ်းသောယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာခွဲခြားမှုပုံစံသည်လည်းအမျိုးသမီးရေးရာ porn ဟုခေါ်သည်။ ၎င်းသည်ပိုမိုမျှတစွာဖြန့်ဝေထားသောအပျော်အပါးကိုပြသပြီးပါဝင်ပတ်သက်သရုပ်ဆောင်များကိုဗီဒီယိုမှလိင်ဆိုင်ရာလုပ်ရပ်တိုင်းအတွက်ပေးဆပ်ရန်သဘောတူခဲ့သည် ဤအရာသည်သင်၏အရာနှင့်တူနေပါက Bellesa သို့မဟုတ် XXConfessions ကိုစမ်းကြည့်ပါ။
ဒါကြောင့်ညစ်ညမ်းမှုဟာသင့်အတွက်ကောင်းတယ်၊ ဆိုးလားဆိုတာဇာတ်ကောင်ရဲ့ကိုယ်ကျင့်တရားဟာသင်ဘယ်လိုအသုံးပြုသလဲ၊ သင်ကဘာယူသလဲ၊ သင့်အပေါ်ဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်မှုအပေါ်မှာမူတည်လိမ့်မယ်။ သင်ကိုယ်တိုင်စဉ်းစားမိလျှင်၊ သူငယ်ချင်းတစ် ဦး သို့မဟုတ်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကပြitနာပိုမိုများပြားလာသည့်အငြင်းပွားမှုနှင့်ကြုံတွေ့ရနိုင်သည်၊ Porn ပေါ်တွင်သင်၏ဦးနှောက် ဒါမှမဟုတ်တစ် ဦး နှင့်အတူ session တစ်ခုအတွက်စာအုပ် လိင်ကုထုံး။ ပြissueနာမရှိကြောင်းစိတ်ချနိုင်သည်၊ သို့မဟုတ်သင်၏ညစ်ညမ်းသောအလေ့အထများကိုသင်မထိခိုက်စေဘဲအဆင့်အထိလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်စတင်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူတိုင်းမှာမတူညီတဲ့အတွေ့အကြုံရှိတယ်။ အရွယ်အစားတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကိုက်ညီမှုဘယ်တော့မှရှိမှာမဟုတ်ဘူး။ ထို့ကြောင့်သင်၏မေးခွန်းကိုဖြေဆိုရန်၊ porn သည်သင့်အတွက်အကျိုးရှိနိုင်သည်။ သင့်အတွက်လည်းမကောင်းဘူး။ ငါ၏အတုံ့ပြန်မှုအများစုလိုပဲ, အဖြေကို ... ကမူတည်သည်။